♪ Angel Shaper: Angel ရေးတဲ့ A For နဲ့က For တဲ့။
“ကြွက်သတ်ဆေးရောင်းသည်” ဆိုတာလေးကို ဖတ်ပြီးရယ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ...။ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်တော်တော်ကောင်းတာပဲလို့လည်း တွေးမိပါတယ်...။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..ခင်ဗျ...။
သမီးကြီးရေ...တော်ချက်...နှစ်ခုလုံး ကောင်းတယ်..ကြုံတိုင်းရွာရောက်ရင် ပြောလိုက်ပါ..လူပျိုကြီး စောတင်မောင်ကို သတိယပါတယ်လို့ ...ဟိဟိ..မင်းသမီးဆိုတော့..ဘာကားရိုက်တာလဲဟင်.ကြုံရာကားနဲ့ တော့ မလိုက်ပါနဲ့ ..တော်ကြာ အမှိုက်ကားဖြစ်နေဦးမယ်..:P..
ကြည်လင်တဲ့ အပြုံး ..
i was smiling with ကြည်လင်တဲ့ အပြုံး
အောင်မလေး ကြက်ဆူဆီနဲ့ကြော်မှာတဲ့.. တော်ပြီ ကြည့်တော့ဘူး ဟီး :)
သိုင်းခရူးရော သိုင်းခရုရော တင်ပါတယ် :P
ကြက်ဆူဆီနဲ့တော့ မလုပ်လိုက်နဲ့ဦး :D
ကြယ်ဖြင်စူရေ အယ့် ဟုတ်ပါဘူး
ကိုကိုတွတ်တို့ ကြုံတိုင်းရွာကို ကြုံရာကားစီးပီး လည်လည်လာတာ လမ်းမှာ ကြက်တူရွေးမတအုပ်နဲ့တွေ့လို့ သွားကြည့်မိတာ
ကြာကြီး ကြောင်ကြည့်နဲ့နော်။ ကြက်ဆူဆီနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်စားပစ်မယ်။ ဟွန်းးးးးး ဆိုလို့ လန့်ပီး ကြံရည်လေးသောက်မလို့ကြံတုန်း ကြွက်သတ်ဆေးပဲ ရောင်းတယ်ဆိုလို့ အိမ်ကိုပဲ လှည့်ပြန်သွားပါဒယ် ခွိခွိ
ဟီး... ကြုံရာကားကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ.... ဥာဏ်ကြီးပဲအေ.... ဟွင်း....
ကိုကိုတွတ်ကိုပြောလိုက်ပါ.... တို့လဲ တတိယတယ်လို့....
(A) ရယ် (က )ရယ် .. ရှေ့ဆုံး ဗ္ဗည်း တွေချည်းပါလား ..
အိမ်ကျယ် ရေ ..
ကြံတိုင်းရွာ ကို ကြွက်သတ်ဆေးရောင်းသွားရင် ကြံ ရည်လေးသောက်ပြီး ။ ကြုံရာကားနဲ့ လိုက်ချင်တယ် ...ကြက်ဆူဆီတော့ ကြောက်ပ ...
ကြယ်အုပ်စုထဲက အိန်ကျယ် ...ကြံရည်စုပ် ကြုံရာကား စီးပြီး ကြင်နာသူ နှစ်ဦးဆုံနိုင်ရင်တွေ ကြွားဝါမနေနဲ့ ကြက်ဆူဆီနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်လိုက်မယ်
လုပ်ကြပါဦး ကြည်လင်တဲ့အပြုံးတပ်ပြီး အိမ်ကျယ်တယောက် ကြည်အေး ရဲ့ ကြာဇံသုပ်ထဲ ကြက်သွေးရောင် ကြွက်သတ်ဆေးထည့် စားနေပါတယ်ဗျို့............
ကဖေါ် ကြယ်စင်ကြယ် A for Angel
ကြာကြီး ကြောင်ကြည့်နဲ့နော်။ ကြက်ဆူဆီနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်စားပစ်မယ် ဆိုလို့ ပြန်ပြေးပြီ...
hayagirl's name က ကြိုင်ကြိုင်ရှိတယ်လေ ဘယ့်နှယ့် မေ့နေတာတုံး ဟိဟိ
သမီးကြီးရောက်တယ် ဖတ်တယ် မန့်သွားတယ် သမီးကြီးတို့များ တော်ချက် ၂ ခုတောင်ရေးပေးနိုင်တယ် နာ တော့ ခေါင်းကိုက်လို့ တခုပဲဟေ့
ကြယ်ကလေးဆီ ကြံရည် လာသောက်တယ်..း)
ကြုံရာကားက ဘယ်ကုမဏီက ထုတ်လာလည်းဗျို.
Angel ကားကုမဏီ ကလား ? :D :P
A for ကိုလာဖတ်ပါတယ် Good !!!!
18 October 2009 at 08:00
ငါ့ သမီးကြီး ရေးပေးတာကျေးဇူး...း)
ရေးတာ တော်တယ် ဟာသဥာဏ် ရွှင်သလို ဖြတ်ထိုးဥာဏ်လည်း ကောင်းပါ့။
18 October 2009 at 16:38
ကြွက်သတ်ဆေးသောက်ပြီး ကြာကြာခံဘို့အရေးကြီးတယ် ...။
ကျိုးတိုးကျဲတဲ သွားတွေဖြစ်သွားမယ် ဘာမှတ်လဲ
အရမ်းကောင်း အရမ်းကောင်း ... ဒါပေမယ့် ကြွက်သတ်ဆေးရောင်းတယ်ဆိုတော့ ကြောက်သွားပီ အနားတောင် မကပ်ရဲတော့ဘူး ...
11. A reason for being late : ကြာသွားလို့ နောက်ကျတာ။
ကိုကိုက ကို့ကို ကိုင်းကိုကိုင်ပြီး ကုန်းအော်နေတယ်
ကြယ်စင်ဖြူရေ ကက ကားကို ကုန်းကြောင်းတွန်းခဲ့တဲ့
ညီမလေးရေးထားတာလေးက ချစ်စရာလေး။ပြုံးရယ်ရတယ် =)
မမကိုလည်း တဂ်ထားပြီး မရေးရင် သောင်းကျန်းမယ် ဆိုတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။ ဘယ်မှ ပတ်ပြေးလို့ မရဘူး။ =)